Niezaka nanao SEO biolojika aho, saingy tsy mandeha ny teknolojia SEO. Inona no tokony hataoko?
Tsy midika akory izany fa ny tanjona farany amin'ny teknolojia SEO ara-organika dia ny hanatontosana fandrosoana maharitra sy maharitra eo amin'ny fifamoivoizana organika. Midika izany fa rehefa tsara ny mampiasa teknolojia SEO marina, ny tranonkalanao dia tokony hahita maromaro mpitsidika tena be dia be, mitondra ny tranonkala mivantana avy amin'ny lisitry ny valin'ny fikarohana Google (SERPs). Saingy inona no tokony hatao, raha toa ka tsy nahomby ny fampiasana teknolojia ara-teknolojika ampiasain'ny SEO hahazoana tombony bebe kokoa amin'ny fifamoivoizana? Tokony hitranga izany, eto ambany ny lisitry ny hetsika fohy ho anao hanandrana sy hiatrehana ny toe-javatra amin'ny tenanao manokana.
Alohan'ny zavatra hafa, manoro hevitra ny fanamarinana ny tranonkalanao aho noho ianao mahazo sazy tanana amin'ny Google. Azo atao tsinontsina izany, satria ny ankamaroan'ny fehezan-teny dia tonga miaraka amin'ny fampahafantarana ao amin'ny Google Search Console. Raha toa ka very ny fifamoivoizan'ny pejy Internet anao (na noho ny votoatiny vitsy na tsy manan-tsahala, spammy, na gray-hat SEO) dia azonao atao tsara kokoa ny mamerina haingana ireo olana ireo raha vao azo atao - clean steelpad qck.
Raha mbola hita mazava amin'ny sazy ampiharina amin'ny Google ianao, dia tokony hijery ny faritra fototra amin'ny tranokalanao, izay niatrika ny lozam-pifamoivoizana indrindra. Etsy an-daniny, raha toa ka toa miavaka ny trangan-javatra toy izany, dia azo inoana kokoa fa manana olana amin'ny tenimiafina manokana na keyphrases izay mampiasa ny tsy mety ianao amin'ny sehatra maro amin'ny tranonkala. Raha tsy izany, raha toa ka misy ifandraisany amin'ny pejin-tranonkala iray manokana ny lozam-pifamoivoizanao, dia asaina mandinika ny rohy pejy ianao. Azo inoana fa ny teknolojia SEO misy anao dia tsy mitsahatra mialoha ny fivoarana mialoha, indrindra amin'ny alalan'ny fanitsakitsahana ny famerenana mivantana.
Ankoatra izany, tokony handinika ny fifaninanana amin'ny tranonkalanao ianao, miaraka amin'ireo fanovana vao haingana izay mety hitranga mandritra ny roa na telo volana farany. Ny toe-javatra toy izany dia mety hitranga mandritra ny vanim-potoana voalohany amin'ny vanim-potoana fanombohan'ny taom-pivoarana na raha toa ianao ka tafiditra amin'ny orinasam-pampandrosoana avo lenta na sehatra fampiroboroboana ny sehatry ny fifaninanana no tena mafy indrindra. Voalohany, jereo ny toerana misy ny fikarohana amin'izao fotoana izao ho an'ireo teny fototra lehibe indrindra mba hahitana mazava tsara ny toerana ahafahan'ny mpifaninana akaiky indrindra hitarika anao. Angamba mety hahazo votoatiny tsara kokoa izy ireo na fifandraisana misy kalitao kokoa? Mariho anefa fa mety ho tsotra ny fisainana mety hitranga eto - ny mpifaninana aminao dia mety efa nampiasa vola ara-teknolojika ara-teknolojika manokana vao haingana mba handresena ireo toerana nitarika teo aloha. Raha toa ka mitranga izany, manolo-kevitra ny hikendry hetsika amin'ny loha-doha aho mba handresy ny fifaninanana ao anatin'ny orinasa misy anao ankehitriny, na azonao atao ny manana fikarohana lalindalina kokoa amin'ny fikarohana lalindalina kokoa mba hisafidy iray hafa amin'ny teny malaza na andian-teny lava kokoa manomboka mahazo ny fitohanan'ny fifamoivoizana.
Na izany aza, ny teknolojia ara-teknolojika misy anao dia mety hamoy ny vazy, noho ny antony hafa. Ny vokatr'izany, ny mpifaninana dia mety hitondra ny fitarihana tsy misy ny tanjony manokana. Amin'izany fomba izany, dia soso-kevitra ny hiverina any amin'ny tranonkalanao ianao ary hianatra ny fampisehoana amin'ny rohy fananganana sy ny votoaty eo an-toerana indray.